Ungayicoca njani iirekhodi zeVinyl, eyona ndlela yokwenza | Iindaba zeGajethi
Ungayicoca njani iirekhodi zeVinyl
Kubonakala ngathi mva nje, kwihlabathi lobuchwephesha esihlala kulo, abantu abaninzi bayabuyela kubudala babo Iirekhodi zeVinyl ukonwabela, nokuba kungokukhumbula, umgangatho wesandi okanye, ngokulula, ngokungazigcini kwidrowa kwaye ubanike usetyenziso. Kule minyaka idlulileyo, kukho amagcisa amaninzi kunye namaqela omculo athe nawo agqiba kwelokuba akhulule imisebenzi yawo emitsha kwifomathi ye vinyl, njengoko inxenye ethile yentengiso ifuna njalo.
Ngaphandle kokuya phambili, ngexesha lokubhalwa kweli nqaku ndiyonwabele irekhodi le-vinyl ukusukela ngo-1984, kwaye nangona ingenawo umgangatho we-CD yangoku yeaudiyo, loo nostalgia isithatha ishumi leminyaka emva, apho unokufumana khona Ukungafezeki kwisandi sevinyl kuyinika ubuhle obubonakala kubo. Kodwa ikwasenza sizibuze singazicoca njani iidiski zethu for fumana owona mgangatho uphezulu kwaye uwagcine ekwimeko entle. Ngaba nalo mbuzo uvela? Sijoyine kwaye uza kufumana ezona ndlela zintle zokwenza.
Ewe kunjalo, into yokuqala ekufuneka uyigcinile engqondweni ayikukhokelwa ngumfanekiso weqweqwe. Ungaze uhlambe ivinyl phantsi kwamanzi abalekayoNgaphandle kokuba ufuna iphepha elijikelezayo elinobunzima kwiqela lakho olithandayo. Xa ucoca ivinyl, kuya kufuneka sithathele ingqalelo inqanaba lokungcola enalo idiski. IVinyl ebigcinwe kwigumbi lokugcina kangangeminyaka engama-20 ayifani nerekhodi esiyisebenzisa rhoqo.
1 Ikhabhoni yefayibha yebhrashi
2 Ibrashi yeVelvet yokucoca iirekhodi zevinyl
3 Ukucoca ivinyl kunye neemveliso esinazo ekhaya
Ikhabhoni yefayibha yebhrashi
Eyona ndlela ilula yokucoca ukungcola komhlaba nothuli yi ibhrashi yefayibha yekhabhoni. Ukuba igama alikothusi, kulungile amaxabiso ayo aphakathi kwe-10 ukuya kwi-20 euro, Ngaphandle kokuya phambili kwiAmazon Ungafumana enye yeempawu zeHama ezijikeleze i-10 yeeros. Ukusetyenziswa kwayo kulula njenge uyidlulise ngaphambi nasemva kokudlala idiski, kwaye kufuneka unonophele kuphela Sukufaka uxinzelelo kakhulu ukuze i-bristles ingangeni kwimisele kwaye ingabonakalisa.
Phakathi kweenjongo zayo kukwakho ne Ukuphelisa umbane ongagungqiyo kumgangatho we-vinyl, ke oku kuya kuyithintela ekutsaleni ubumdaka ngakumbi. Ngesi sixhobo silula siya kufezekisa ukuphucula imeko yolondolozo lweerekhodi zethu kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuphucula umgangatho wesandi.
Ibrashi yeVelvet yokucoca iirekhodi zevinyl
Singatsho ukuba esi sisombululo ngumzala wokuqala walowo ukwicandelo elidlulileyo. Ngokusisiseko isekwe kumgaqo ofanayo, ngumahluko okhoyo kuphela izinto zokuxubha, que yi-velvet endaweni ye-carbon fiber. Yinto ethambileyo, ke sinayo umngcipheko omncinci wokonakala kwediski. Icala elisezantsi lebrashi yevelvet?
Ngokuyintloko oko inomtsalane ngakumbi ukungcola, ke amaxesha ngamaxesha kuyakufuneka siyicoce ngotywala, umzekelo, kwaye yome. Ngaphantsi kwee-euro ezilishumi sinale khithi leyo, ukongeza ekuqulatheni ibrashi yevelvet, ibandakanya ilaphu le-microfiber kunye nebrashi encinci ukucoca inaliti yokujika.
Ukucoca ivinyl kunye neemveliso esinazo ekhaya
Kodwa hlisa umoya. Ukuba awunayo iibrashi ezimbini esikubonise zona ngaphambili, okanye awufuni kuzithenga, ungakhathazeki. Kukho ezinye iindlela zokucoca iivinyls ngeemveliso esinazo ekhaya, okanye kwimeko yokungabinazo, sinokuthenga ngokulula kwaye ngexabiso eliphantsi. Hayi, asithethi ngokubeka iirekhodi phantsi kwempompo, kodwa malunga Izinto ezilula ezinje ngamalaphu microfiber, amalaphu othuli okanye iiglasi zokucoca izinto zokucoca. Uyakhumbula xa sasichaza indlela yokucoca isikrini sakho esiphathwayo? Ewe, izinto ezininzi ziqhelekile ekucoceni iirekhodi zevinyl.
Kubaluleke kakhulu kuphephe ukusebenzisa izinto ezinjengephepha langasese okanye izicwili, njengoko zikhupha iintsalela ezinokonakalisa i-vinyl. Kufuneka sithathele ingqalelo xa usebenzisa ilaphu le-microfiber yenze entsha kraca, ukuba asikaze siyisebenzise ukucoca enye into, kwaye loo nto Masiyihlambe okanye siyisebenzisele ezinye iinjongo emva kokuyisebenzisa, kwaye sisebenzise entsha kwakhona. Ngale nto siyakuphepha ukukrwela idiski ngenxa yamasuntswana anokwenzeka ashiyekileyo ngenxa yokucoca ezinye izinto.
Njengoko ubonile, Ukucoca irekhodi le-vinyl ngumsebenzi olula kakhulu kwaye ayifuni izinto ezibizayo okanye ezinzima ukufumana izinto ezithile, kwaye nokuba Kungenziwa ngezinto zokucoca esinazo ekhaya, nangona utyalo-mali oluncinci kwenye yeebrashi eziboniswe apha ngasentla Iya kusivumela ukuba sigcine iivinyl zethu zikwimeko engcono kwaye siqhubeke nokufumana umgangatho wesandi ixesha elide..
Sincoma musa ukusebenzisa utywala, njengoko iqulethe uthotho lweeasidi kunye nezinto ezinyibilikayo eziyingozi kwinto leyo kwaye zinokwenza ukuba ii-disc zethu ezixabisekileyo zingasebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungayicoca njani iirekhodi zeVinyl
Uyawenza njani umcimbi kuFacebook